किन भयाे हिलाेकाे वर्षा ? – Shirish News
किन भयाे हिलाेकाे वर्षा ?
जनकपुर २ गते असार
हिजाे राख्दा राम्रै भएको गाडी वा मोटरसाइकलमा हिलो कहाँबाट आयो भनेर अचम्ममा पर्नुभयो ? भूइँमा भएको धुलो पो उछिट्टिएर हिलो भयो कि भन्ने सोच्नुभयो कि ? तपाईँको गाडी वा मोटरसाइकलमा भूइँको हिलो लागेको होइन । शुक्रबार राति हिलो सहितकै वर्षा भएकाले त्यसो भएको हो ।
नेपालमा बहने हावा भारत हुँदै आउने भएकाले त्यहाँको धुलो पनि सँगै आएको मौसमविद् रिमालको भनाई छ । हिलो पानी परेपछि के भयो भनेर धेरै जना अन्यौलमा परेका थिए ।-शिस
चुरे संरक्षण दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण